Wargeyska Washington Post: Xad gudubyada bustaha ka hooseeya ee ciidnka Kenya ay u geystaan Soomaalida. – Kismaayo24 News Agency
Wargeyska Washington Post: Xad gudubyada bustaha ka hooseeya ee ciidnka Kenya ay u geystaan Soomaalida.
by admin 5th November 2019 096
Warbixin dheer oo kasoo baxday hay’adda u dooda xaquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya gaar ahaan kuwa militryga ay xad gudubyo xad dhaaf ah u geystaan dadka Soomaaliyeed ee degan magaalooyinka ku yaala xaduuda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Warbixintaan oo aad u dheer laguna qoray wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay inay xad dhaaftay dambiyada ka dhanka ah xaquuqda aadanaha ee ay u geystaan ciidanka Kenya dadka Soomaaliyeed marka Al-Shabab weerar geysto.
Hay’adda Human Rights Watch waxay warbixntaan ku sheegtay inay diwaan galisay in ka badan 88 kiis oo ay ciidamada Kenya geysteen.
Meesha ay warbixintaan sida gaarka ah u dul istaagtay waa tuulo la yiraahdo oo ka tirsan ismaamulka Mandheera.
Tuuladaan dadka ku nool waxay ku joogto u yihiin cabsi ay qabanaan ciidamada militryga Kenya ee KDF loo yaqaan kuwaasoo dila xira jir dilna u geysta dadka magaalada marka la weeraro ayagoo jidka maraya.
Magaaladaan ceelashii biyaha waa laga xabaalay waxaana ay u doontaan meelo fog fog waxaana dhibaatadaas u geystay ciidamada Kenya.
Mar kasta oo ay maqlaan in ciidamada gaadiidkoodu kusoo dhaw yihiin waxaa laga baxaa magaalada habeenkiina si dareen leh ayaa lagu joogaa sida ay sheegeen dadka degan.
In ka badan inta ay ka qabaan Al-Shabab ayay naftooda kala baqaan ciidamada Kenya dadka Soomaaliyeed ee xaduuda degan ayaa lagu yiri warbixintaan lagu daabacay wargeyska The Washington Post ee Maraykanka kasoo baxa.
Warbixintaan waxaa lagu sheegay in 8 sanno ee ay ciidamada Kenya ku sugan yihiin Soomaaliya inay aad u bartilmaameysteen dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan markii ciidamadu la kulmeen weeraro Al-Shabab kaga yimiid.
Ciise Axmed waxaa uu ka yimid yahay dadka degan tuuladda Ceel Kutulo la yiraahdo waxaana uu u sheegay guddiga warbixintaan diyaarshay in cabsi darteed ay qoteen godad ay ku dhuuntaan.
“Waan cararnaa oo dhuumanaa mar kasta oo aan helno war sheegaya in ciidamadu soo socdaan” ayuu yiri Ciise.
“Dadka halka degan waa muwaadiniin Kenyan ah haddana cabsi ka badan tan aan ka qabno Al-Shabab ayaan ciidamada Militryga ka qabnaa” ayuu sidoo kale yiri.
Guddiga ka socda hay’adda Human Rights Watch waxay sheegeen inay la kulmeen shaqsiyaad inta ciidamada Kenya xireen oo lasii daayay hase ahaatee cabsi diiday darteed diiday inay ka hadlaan wixii ay la kulmeen.
“Ciidamada Kenya wixii doonaan ayay sameeyaan mana jirto cid la hadasha ama na celisa” waxaa sidaas yiri nin kale oo dadka degaanka ah oo la yiraahdo Max’ed Cilmi.
Max’ed waxaa uu adeer u yahay C/qaadir Cilmi oo 34 sanno jir ahaa oo ay ciidamada Kenya dileen markii miino loo dhigay kolonyadooda meel yuuladooda u dhaw.
Ninkaan waxaa uu sheegay inay habeenkii ayagoo dareen qaba seexdaan.
Dowladda Soomaaliya Oo Gargaar U Direysa Gobolada Baay Iyo Gedo
Daawo Madaxweyne Kuxigenka Jubbaland iyo Wasiirka Maaliyada oo Munasabad muhiim ah ka qayb galay
TOOS U DAAWO: Xaflada xil wareejinta madaxweyne farmaajo oo hada ka socota Villa Soomalia
Tifaftiraha K24 16th February 2017
Akhriso: Magacyada 5 Kamid ah Xubnaha Aqalka Sare ee Maanta Cadaado lagu doortay Iyadoona ay ka dhexmuuqato Haweyneyda ugu Horeyso ee Aqalka Sare+Sawirro
Tifaftiraha K24 15th October 2016